Recresco na-eji sistemụ mkpuchi RFID dị nso na ụlọ ọrụ nrụpụta iji belata ihe ọghọm nke nkwekọrịta n'etiti ndị mmadụ na ụgbọ ala | Toptag
N'ime ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ụgbọ ala na-agagharị nwekwara ike ịdaba na ndị mmadụ na-aga ije. Ya mere, Recresco arụnyela usoro mkpu dị nso na ụlọ ọrụ ya iji belata ihe egwu dị otú ahụ.
Gasgoo Automotive News N'agbanyeghị nkwalite nke ọma nke teknụzụ ọhụrụ na usoro ọrụ ka mma, nkwekọrịta n'etiti ndị mmadụ na ụgbọ ala / ihe mberede ka na-eme, ọkachasị na ụlọ ọrụ mkpofu na ụlọ ọrụ mmebi. Dabere na akụkọ mgbasa ozi si mba ọzọ, ụlọ ọrụ na-emegharị iko ahụ Recresco emejuputala atumatu siri ike na nchekwa na ụlọ ọrụ niile, mana n'oge na-adịbeghị anya ụlọ ọrụ ahụ etinyekwala usoro mkpu nso nke ZoneSafe iji meziwanye nchekwa ọrụ ma belata ndị na-agagharị agagharị na ụgbọ ala ọrụ. ihe egwu.
Recresco ekpebiela na ịgagharị ụgbọ na enweghị ahụ ụzọ bụ isi ihe na-eduga n'ihe ize ndụ nke ijikọta ụgbọ ụkwụ. Yabụ, ọ na-atụ anya itinye ego na teknụzụ metụtara ya iji nyere aka belata ihe egwu dị otú ahụ ma melite nchekwa ndị ọrụ.
Mgbe nyochachara nlezianya nke ngwaahịa na ahịa, Recresco kpebiri iji Radio Frequency Identification (RFID) -ZoneSafe sistemụ na gburugburu ọrụ iji mee ka nchekwa dịkwuo elu.
Mpaghara ZoneSafe nwere ike itinye ya na ngwaọrụ mkpanaka nke ụdị na nha niile, na-eji teknụzụ RFID iji mepụta ebe a na-adịghị ahụ anya, mpaghara nchọpụta 360 gburugburu ụgbọ ala, akụ, ụzọ na ụzọ ụkwụ.
N'ime usoro ọrụ, ndị ọrụ Recresco niile dị na saịtị kwesịrị iyi uwe elektrọnịkị na ogwe aka ha. Mgbe usoro mkpu dị nso na-achọpụta onye na-agagharị n'okirikiri ngwaọrụ mkpanaka ahụ, ọ ga-ewepụta mkpu dị egwu ma pụta ìhè iji dọọ onye na-ahụ maka ụgbọala aka ka ọ kwụsị ozugbo ọ na-agagharị.
Ọbụna ma ọ bụrụ na enwere mgbochi, ntụpọ anya, ma ọ bụ obere ọhụụ, enwere ike ịchọpụta mkpado ZoneSafe na-enweghị ịnọ n'ihu. Onye nduzi nke Recresco kwuru, sị: "Anyị kwenyere na usoro ZoneSafe bụ ụzọ dị mma iji hụ nchekwa nke ndị na-agagharị na ụlọ ọrụ ahụ."